पहिलो प्रेम - किन हामी साँच्चै उहाँलाई कहिल्यै बिर्सनुहुन्न बेजिया
किन पहिलो प्रेम कहिल्यै बिर्सिएको छैन
सुसाना Godoy | | भावनाहरु
पहिलो प्रेम को बारे मा धेरै भनिन्छ र यो हो कि जस्तै, यो भावनाहरु र पलहरु को एक हो कि जीवन को लागी रेकर्ड रहन्छ। तर के तपाइँ कारणहरु लाई थाहा छ कि हामी कहिले पनी बिर्सन सक्दैनौं यदि समय बित्दै जान्छ? ठिक छ, यो तपाइँको लागी यो पत्ता लगाउन को लागी सही समय हुन सक्छ।
त्यहाँ धेरै पलहरु छन् कि हामी त्यो पहिलो प्रेम पछि बाँच्नेछौं। हामी नयाँ मानिसहरु लाई भेट्नेछौं र जीवन पुरा तरिकाले परिवर्तन हुनेछ। तर एक दिन हामी हाम्रो जीवन को समीक्षा गर्न को लागी बसे र त्यो माया अझै पनी उपस्थित छ। एउटै भावनाहरु संग होइन तर शायद उहि स्नेह संग। पत्ता लगाउनुहोस् किन यस्तो हुन्छ!
1 किन पहिलो प्रेम कहिल्यै बिर्सिएको छैन
2 भावनाहरु बलियो छन्
3 पहिलो ब्रेक
4 एक अधिक निर्दोष जडान
5 यो तपाइँको भविष्य को लागी मद्दत हो
यसको मतलब यो होइन कि यो सबै भन्दा राम्रो वा सबै भन्दा परिपक्व अनुभव हो, तर यो हाम्रो दिमाग र हाम्रो जीवन मा एक प्वाल छ। तेसैले, हामी सधैं त्यो कारण को लागी कारणहरु को लागी हेर्नु पर्छ र पहिलो मध्ये एक हो किनकि जब हामी पहिलो पटक प्रेममा पर्छौं, सबै कुरा हाम्रो लागी नयाँ छ। ती पलहरु, संवेदनाहरु र यो मोह को भाग को खोज, यो सबैभन्दा विशेष र अद्वितीय बनाउनुहोस्। जब पनी हामी पहिलो पटक को लागी केहि अनुभव गर्छौं र त्यो कारण को लागी, यो खाता मा लिन को लागी मुख्य कारणहरु मध्ये एक हो।
भावनाहरु बलियो छन्
सायद किनकि किनकि हामीले उनीहरुलाई पहिले कहिल्यै यस्तो महसुस गरेका छैनौं, हामी विश्वास गर्छौं कि यो सब भन्दा राम्रो चीज हो कि हामीलाई कहिल्यै भयो। उनीहरु अनुपम भावनाहरु र पलहरु हुन् कि हामी पहिले कहिल्यै बाँचेका छैनौं। तेसैले, उनीहरु मेमोरी मा अधिक रहन्छन्। जबकि जीवन भर हामी अधिक सम्बन्ध हुनेछ र पक्कै पनी उहि तरीका मा याद छैन, उनीहरु राम्रो वा नराम्रो जान्छन्। त्यहाँ भावनाहरु छन् कि अधिक जडित रहन्छन् र पहिलो प्रेम को ती मध्ये एक हो। कहिले काहिँ लगभग अकल्पनीय तरीका मा।
सबै कुरा यति सुन्दर हुने छैन र हामी यो जान्दछौं। कहिलेकाहीँ हामी पनि कष्ट भोग्नु पर्नेछ र यसको लागी, पहिलो मायाले यसको ख्याल राख्नेछ। हामी यो चरण यति तीव्रता संग बिताएका छौं, तब ब्रेक धेरै पछाडि छैन। यो पनि तीव्र हुनेछ र हामी सोच्नेछौं कि संसार बिग्रँदैछ, तर सबै कुरा बित्छ। जे होस् मामिलाहरु को विशाल बहुमत मा यो एक सबैभन्दा दर्दनाक ruptures र एक हो कि सबैभन्दा scarring कारण हुनेछ। यो धेरै गाह्रो छ केहि छुटकारा पाउन को लागी हामीले सोचेका थियौं कि जादुई र अद्वितीय थियो। तिमीलाई लाग्दैन?
एक अधिक निर्दोष जडान
यदि तपाइँ पछाडि हेर्नुहुन्छ म निश्चित छु के तपाइँ किशोरावस्था को क्षणहरु सम्झनुहुन्छ? उसको ओठ मा मुस्कान संग। ती मित्रताहरु, मानिसहरु लाई भेट्ने ती पलहरु जब तपाइँ अधिक कमजोर र अधिक निर्दोष महसुस गर्नुभयो। खैर, एउटै कुरा माया मा हुन्छ। आज तपाइँ पहिले नै अर्को अनुभव छ र तपाइँ पहिले नै थाहा छ कसरी तपाइँको आवश्यकताहरु को अनुसार निर्णय गर्न को लागी तर अतीत मा यो उस्तै थिएन। तेसैले, यो वा एक मेमोरी मा आँखा झिम्काउने हाम्रो पहिलो माया मा फिर्ता ल्याउँछ।
यो तपाइँको भविष्य को लागी मद्दत हो
यद्यपि तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न, पहिलो प्रेम ढोका हो कि तपाइँको लागी भविष्य खोल्छ। किनकि तपाइँ साना पाइलाहरु मा जीवन बिताउनु पर्छ। यो एक लामो बाटो हो र एक अनुभव पछि धेरै अन्य सधैं आउनेछन्। यो तपाइँलाई थाहा छ कुन बाटो लिने वा कुन होइन। तेसैले हामी यसलाई हाम्रो जीवन मा एक महान मद्दत को रूप मा विचार गर्न सक्छौं। जे होस् समय मा हामी विश्वास गर्छौं कि केहि राम्रो संग जानेछ जब यो समाप्त भयो, समय मा हामी देख्नेछौं कि यो विपरित भएको छ। यो तपाइँलाई बिल्कुल परिवर्तन गर्नुहुनेछ, किनकि यो तपाइँको व्यक्तिगत बृद्धि को लागी एक बढावा हो। तपाइँ एक फरक तरिका मा तपाइँको डर को सामना गर्नुहुनेछ र यसले तपाइँलाई चीजहरु लाई फरक तरीकाले देख्न को लागी बनाउनेछ। के तपाइँ अझै तपाइँको पहिलो प्रेम सम्झनुहुन्छ? के तपाइँ यसलाई बिल्कुल बिर्सनुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » भावनाहरु » किन पहिलो प्रेम कहिल्यै बिर्सिएको छैन
कसरी आँखा मुनि झोला बाट छुटकारा पाउन
टमाटर, हैम र आडू सलाद